Gini bu usoro nzipu ọdịnaya (CDN)? | Martech Zone
Ọ bụ ezie na ọnụahịa na-aga n'ihu ịdaba na nnabata na bandwidth, ọ ka nwere ike ịbụ ihe dị oke ọnụ iji kwado weebụsaịtị na ikpo okwu nnabata. Ma ọ bụrụ na ị naghị akwụ ụgwọ buru ibu, ohere nwere ike ịbụ na saịtị gị adịghị nwayọ nwayọ - na-efunahụ ahia gi.
Ka ị na-eche maka sava gị na-akwado saịtị gị, ha ga-anagide ọtụtụ arịrịọ. Fọdụ n'ime arịrịọ ndị ahụ nwere ike ịchọ ka ihe nkesa gị na-ekwurịta okwu na sava nchekwa data ndị ọzọ ma ọ bụ ihe mmemme mmemme nke atọ (API) tupu ha ewepụta ibe dị egwu.
A kpokọtara ndị ọrụ na sava a nwere ike lie n'oge na-adịghị anya na arịrịọ. Nke ọ bụla n'ime arịrịọ ndị a na-ewe oge. Oge dị mkpa - ma ọ bụ onye ọrụ na-eche ka ibe ibu ma ọ bụ njin nchọta ihe nchọta na-abịa ịchacha ọdịnaya gị. Ọnọdụ abụọ ahụ nwere ike imerụ azụmahịa gị ma ọ bụrụ na saịtị gị adịghị nwayọ. Ọ bụ ọdịmma gị kachasị mma iji mee ka ibe gị dị ọkụ ma na - eme ngwa ngwa - ịnye onye ọrụ nwere saịtị nwere ike ịbawanye ahịa. Inye Google na saịtị nwere ọnyà nwere ike ị nweta peeji nke ibe gị edepụtara ma chọta.
Ọ bụ ezie na anyị bi n'ụwa dị ịtụnanya nke nwere akụrụngwa builtntanetị wuru na eriri nke ahụ bụ ihe na-enweghị isi na ngwa ngwa, ọdịdị ala ka na-arụ nnukwu ọrụ na oge ọ na-ewe n'etiti arịrịọ site na ihe nchọgharị, site na ndị na-anya ụgbọ mmiri, na web host… na azu.
N’okwu ndị dị mfe, n’ihu ka sava weebụ gị si n’aka ndị ahịa gị, jiri nwayọ webụsaịtị gị bụrụ ha. Azịza ya bụ ka ahu nagide a netwọk nnyefe ọdịnaya.
Ọ bụ ezie na ihe nkesa gị na-ebu ibe gị ma na-achịkwa ọdịnaya niile dị ike na API arịrịọ, netwọọdụ nnyefe ọdịnaya gị (CDN) nwere ike ichekwa ihe dị na netwọkụ kesara na ebe data dị n'akụkụ ụwa niile. Nke a pụtara na atụmanya gị na India ma ọ bụ United Kingdom nwere ike ịlele saịtị gị dị ka ngwa ngwa dị ka ndị ọbịa gị n'okporo ámá.
Akamai bụ ọsụ ụzọ na teknụzụ CDN
Ndị na-enye CDN
Gwọ maka CDN nwere ike ịnweta site na n'efu ka ọ bụrụ ihe na-egbochi ihe ọ bụla dabere na akụrụngwa ha, nkwekọrịta ọrụ ọrụ (SLAs), scalability, reduncancy, na - n'ezie - ọsọ ha. Ndị a bụ ụfọdụ ndị egwuregwu n’ahịa:
Igwe ojii nwere ike ịbụ otu n'ime CDN kachasị ewu ewu n'ebe ahụ.
Ọ bụrụ n’ịga WordPress, Jetpack awade ya CDN nke na-siri nnọọ ike. Anyị na-akwado saịtị anyị na Flywheel ndị gụnyere CDN na ọrụ ahụ.
CDN StackPath bụ nhọrọ dị mfe maka obere azụmaahịa nwere ike inye nnukwu arụmọrụ.
Amazon CloudFront nwere ike ịbụ CDN kasị ukwuu na Amazon Simple Nchekwa Ọrụ (S3) dịka onye na - eweta CDN kachasị ọnụ ugbu a. Anyị na-eji ya na ụgwọ anyị na-efu obere $ 2 kwa ọnwa!
Netiwọki Limelight or Akamai Netwọk bụ ihe ewu ewu na oghere ụlọ ọrụ.
Foto si Akamai Netwọk
Nnyefe ọdịnaya gị agaghị ejedebe na onyonyo static, kwa. Enwere ike igosipụta ụfọdụ weebụsaịtị dị ike site na CDN. Uru nke CDN dị ọtụtụ. E wezụga ime ka saịtị gị dịkwuo mma, CDNs nwere ike inye aka na ibu ọrụ ihe nkesa gị na scalability karịa ike ha.
CDNs nke ụlọ ọrụ na-adịkarị mkpa ma nwekwaa oge ọ bụla. Site na iwepụ okporo ụzọ na CDN, ị nwedịrị ike ịchọpụta na ọnụahịa nnabata gị na bandwidth na-adaba yana mmụba ego. Ọ bụghị ego ọjọọ! E wezụga image mkpakọ, inwe netwọkụ nnyefe ọdịnaya bụ otu n'ime ụzọ kachasị mma iji jeere saịtị gị ọsọ ọsọ!
Ngosipụta: Anyị bụ ndị ahịa na ndị mmekọ nke CDN StackPath na n'anya ọrụ!
Tags: akamaiNetwọk Akamaiamazon Cloudfrontcdnigwe ojiinetwọk nnyefe ọdịnaya-esi mee ka gị na saịtị ngwa ngwajetpack cdnamaNetelight netwọkmaxcdnbelata ibu ogegbasaa saịtịiheKedu ihe bụ cdnkedu ihe netwọọdụ nnyefe ọdịnayaWordPress
Etu otu Slow Weebụ Na-emebi Business Gị
Mee 8, 2012 na 7: 13 PM
Maka mgbakwunye ọzọ na CDN's iji hụ na oge na-aga n'ihu ị nwere ike itinye atụmatụ Dual-CDN. N'ụzọ bụ isi, ị nwere ike ịnwe nguzozi ibu n'etiti CDN abụọ n'otu oge. Ị nwere ike ịchọta ozi ndị ọzọ gbasara ya site na ịlele saịtị a.